नेपाल आज | विपी प्रतिस्ठानका उपकुलपति गिरीको पदवी पनि नक्कली !
समाचार स्वास्थ्य देश प्रदेश १
विपी प्रतिस्ठानका उपकुलपति गिरीको पदवी पनि नक्कली !
आइतबार, २७ भदौ २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
अनियमितताको आरोप लागेका सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापकको पदवी पनि नक्कली रहेको खुलेको छ ।
१५ महिनाअघि प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त भएर कार्यरत डा. गिरीले आफ्नो नामको अगाडि ’प्राध्यापक’ उल्लेख गर्ने गरेका थिए। तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उनी प्राध्यापक नभएको पुष्टि गरेको छ।
प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत चिकित्सकले उनको प्राध्यापक पदवी ‘नक्कली’ भन्दै उनीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। मन्त्रालयले आइतवार जारी सूचनामा डा. गिरी प्राध्यापक भएको भन्ने कुनै प्रमाण नभेटिएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ।
विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजको इन्टरनल मेडिसिन डिपार्टमेन्टको प्रमुख र प्राध्यापकको रूपमा काम गरेको गिरीले दावी गर्दै आएका थिए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निजी संस्थालाई प्राध्यापक पद दिने कुनै अधिकार वा कानुन नभएको जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको छ।
प्रतिष्ठानका चिकित्सकले उनको पदवीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएपछि बनेको छानबिन समितिले प्राध्यापक पदवीको आधार पेस गर्न डा. गिरीलाई समय दिएको थियो। दिइएको समयमा गिरीले कागजात पेस गर्न नसकेको पनि जनाईएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार उपकुलपति गिरीले नभएको पद उल्लेख गरेर अख्तियार दुरुपयोग गरेको भए यसै अनुसार कानुन आकर्षित हुने बताए।
उपकुलपति अनियमितताको आरोप बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान डा. ज्ञानेन्द्र गिरी प्राध्यापक